Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) ရာသီ မမှန်ရင် ဖတ်ပါ ~ Myanmar Forward
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) ရာသီ မမှန်ရင် ဖတ်ပါ
Posted by drmyochit Friday, February 21, 2014, under ကျန်းမာရေး | No comments
(၁) သမီးအသက်က ၂၀ ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ၁၈ နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်စကျအချိန်က ကလေးမယူချင်သေးလို့ ၃ လဆေးတစ်ခါ ထိုးဖူးပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ၂ လအကြာမှာဘဲ အမျိုးသားကတာဝန်နဲ့ နိုင်ငံခြားထွက်သွားခဲ့လို့ ဆေးဆက်မထိုးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အပျိုတုန်းကရာသီမှန်ပါတယ်။ ၃ လဆေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်း ရာသီလာရင် ရက်တော်တော်ကြာအောင် နည်းနည်းဆင်းနေလို့ OG နဲ့ပြတော့ PRIMOLUTE N ဆေး ၃ လလောက် သောက်လိုက်တော့ ကောင်းသွားပါတယ်။ ဆေးရပ်ပြီး ၂ လလောက်နေတော့ ရာသီကမလာမလာနဲ့ OGနဲ့ပြန်ပြတော့ သွေးစစ်ကြည့်ပြီး T4, TSH ကတော့ normal ဖြစ်ပြီး PROLACTIN များနေလို့ ရာသီမမှန်တာဆိုပြီး Carbargolin ၃ ရက် သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ရာသီပုံမှန်ဖြစ်အောင် PRIMOLUTE N ပြန်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ OG တစ်ယောက်နဲ့ပြောင်းပြတော့ TVS ရိုက်ခိုင်းတော့ သားဥအိမ်နှစ်ခုစလုံးမှာ ရေအိတ်သေးသေးရှိတယ်။ PCOS ဆိုပြီး Metformin denk 500 ကို မနက်ကို တစ်ခြမ်း ညတစ်ခြမ်း ၃ လသောက်ခိုင်းပါတယ်။ နို့အုံကနေလည်း ညှစ်လိုက်ရင် နို့ရည်ကြည်နည်းနည်း ထွက်ပါတယ်။ ၃ လပြီးTVS ပြန်ရိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်တော့လည်း မပျောက်သေးလို့ ၃ လသောက်လိုက် TVS ရိုက်နဲ့ ၉ လလောက်ကြာပါတယ်။ PROLACTIN ပြန်စစ်ကြည့်တော့လည်း normal ဖြစ်နေပါတယ်။ OG က Diane35 (Cyproterone acetate 2mg, Ethinylestradiol 0.035mg) ဆိုတဲ့ဆေးပြောင်းပေးပြီး ၄ လသောက်ခိုင်းပြီး TVS ပြန် ရိုက်တော့လည်း PCOS က မပျောက်ပါဘူး။ Brain ကို MRI ရိုက်ကြည့်တော့လည်း NORMAL ဘဲလို့ပြောပါတယ်။ နို့ရည်ထွက်တာကလည်း PCOS ကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ အခု Diane35 ရပ်လိုက်တာနဲ့ ရာသီမမှန်တော့ပြန်ပါဘူး။ ဆေးကုနေတာ ၂ နှစ်ကျော်နေပါပြီ။ နောက်လအနည်းငယ်ကြာရင် အမျိုးသားအခြေကျတဲ့နိုင်ငံကိုလည်း လိုက်သွားရတော့မယ်။ အခုအခြေတကျဖြစ်ပြီမို့ ကလေးလည်းလိုချင်ပါတယ်။ ကလေးကော ရနိုင်ပါ့မလား။ ၂ နှစ်လောက် ဆေးကုနေ တာတောင်မကောင်းလာတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းကို မသိတာပါ။ သမီးဖြစ်နေတဲ့ရောဂါက ဘာလဲဆိုတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါ။ ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလဲ အကြံပေးပေးပါဆရာ။ နောက်ဆုံး result နဲ့ သွေးအဖြေများနဲ့ MRI reault ကို attach လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(၂) သမီး အသက်က အခု ၂၇ နှစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ 48 KG လောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အပျိုပေါ်ဝင်စ ၁၅ နှစ် လောက်ကတည်းက ရာသီသွေး မမှန်တတ်ပါ။ အခုထိ တခါတလေ ၂ လ ၃ လ ခြားပါတယ်။ ကြာချိန် ၃ ရက် လောက်ဘဲ ရှိတတ်ပြီး၊ အရမ်း ဗိုက်နာခြင်းတော့ မရှိသလောက်ပါ။ အသက် ၁၉ နှစ်တုန်းကတော့ ၆ လ အထိ ထိန်ဖူးပြီး၊ နုတ်ခမ်းမွှေး ရေးရေးလဲ သတိထားမိပါတယ်။
ပြီးတော့ အမွေး (ခြေသလုံး၊ ဂျိုင်း) လဲ နည်းနည်း ကြမ်းသလို၊ Areola နို့အရောင်ရင့် အဝိုင်း ပတ်ပတ်လည်မှာလဲ အမွေးလေးတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ရှည်ပါတယ်။ ကျား-ဟော်မုန်းသတ္တိ ကဲတာပါလားရှင်။ အဲ့လိုတွေရှိလို့ ကလေးမရမှာ အရမ်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ၆ လ လောက်နေရင် ကလေး ယူချင်လို့ ဘယ်လို တားဆေးက အဆင်ပြေမလဲ။ သုံးလခံထိုးဆေး ဆိုရင်လဲ ကလေးပြန်ရဖို့ ကြာမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။
PCOS ရောဂါဆိုတာ အမျိုးသမီး မီးယပ်ရောဂါတခု ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီး ၅-၁ဝ% မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးမရဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းတရားလဲ ဖြစ်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာက ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းက စတယ်။
ရာသီမမှန်တာ၊ ရာသီမလာတာ၊ ဝက်ခြံထွက်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်များတာ၊ အမွှေးပေါက်များတာ၊ လူအဝလွန်လာတာ၊ ဆီးချို-သွေးတိုး-နှလုံးရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဆေးကုသမှု သေသေခြာခြာလုပ်ရင် အများကြီး သက်သာစေတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ တခုချင်းကို ကုသရတယ်။
1. Menstrual disturbances ရာသီမမှန်တာ နဲ့
2. Androgens ကျား-ဟော်မုန်းများနေတာ ၂ ခု ဖြစ်တယ်။
1. Primary amenorrhea မွေးကတည်းက ရာသီတခါမှ မလာတာ၊
2. Oligomenorrhea ရာသီအလာနည်းတာ၊
3. Secondary amenorrhea ရာသီထိန်တာ၊
4. Anovulatory cycles ရာသီလာပေမဲ့ မျိုးဥ မထွက်တာ နဲ့
5. Heavy bleeding သွေးအများကြီး ဆင်းတာ၊ ဖြစ်နိုင်တယ်။
1. Acne ဝက်ခြံပေါက်တာ၊
2. Hirsutism အမွှေးပေါက်များတာ၊
3. Male-pattern hair loss ယောက်ျားတွေလို ဆံပင်ကျွတ်တာ (ထိပ်ပြောင်တာ) တွေ ဖြစ်တယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကသာ ရောဂါ နာမယ် တပ်တာနဲ့ ကုသတာအတွက် အရေးကြီးတယ်။ မျိုးဥအိမ်မှာ အကျိတ်လေးတွေ တွေ့တာနဲ့တော့ ရောဂါမဟုတ်သေးဘူး။ ရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ်ကို ရောဂါလက္ခဏာတွေ ကြည့်ရမယ်။
• Androgen ကျား-ဟော်မုန်း (အင်ဒရိုဂျင်) စစ်ရတယ်။ DHEA နဲ့ Testosterone တွေ ကဲနေတတ်တယ်။ ကျား-ဟော်မုန်း (တက်စတိုစတီရုံး) များနေတာ တခုထဲနဲ့တော့ PCOS ရောဂါလို့ မပြောပါ။
• Hypothyroidism လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းနည်းတာ စစ်ရတယ်။
• Prolactin ခေါ်တဲ့ နို့ထွက်-ဟော်မုန်း စစ်ရတယ်။
• မျိုးဥအိမ် Ovary နဲ့ Adrenal glands ကျောက်ကပ်အထက်က (အဒြီနယ်လ်) အိတ်တွေ Tumor အလုံး ဖြစ်နေသလား စစ်ရတယ်။
Ultrasound ရိုက်ရင် Ovary မျိုးဥအိမ်မှာ အရည်အောင်းနေတဲ့ Cysts အိတ်လေးတွေ တွေ့မယ်။ Computed Tomography (CT scan) နဲ့ Magnetic Resonance Imaging (MRI) တွေရိုက်ရင်လဲ တွေ့မယ်။ CT scans ရိုက်တာက X-rays နဲ့ Dyes သုံးရလို့ လူတိုင်းကို မလုပ်ပါ။
1. အမျိုးသမီး အသက်ကိုကြည့် ကုရတယ်။ ငယ်သူတွေကို ကိုယ်ဝန်တားဆေး ပေးနိုင်တယ်။ ရာသီမှန်စေမယ်၊ သားအိမ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းစေမယ်။
2. နောက်တနည်းကတော့ Progesterone ဟော်မုန်းကို ပေးလိုက်-ရပ်လိုက် လုပ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ကိုတော့ တားပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
3. Acne ဝက်ခြံပေါက်နေသူ၊ အမွှေးများနေသူတွေကို ဆီးသွားဆေး Spironolactone (Aldactone) ပေးနိုင်တယ်။ သူတေို့ကို ဒီဆေးပေးရင် (ပိုတက်ဆီယမ်) စစ်နေရမယ်၊ ကျောက်ကပ် စစ်နေရမယ်။
4. မျက်နှာ အမွှေးပေါက်သူတွေက Eflornithine (Vaniqa) (ခရင်) လိမ်းရတယ်။
5. ကလေးရချင်သူတွေဆိုရင် Clomiphene (Clomid) ဆေးပေးရင် Ovulation မျိုးဥထွက်စေနိုင်တယ်။ လိုအပ်ရင် Gonadotropin ဟော်မုန်း ပေးမယ်။ တခြား ကလေးရစေနည်းတွေ သုံးနိုင်တယ်။
6. ကိုယ်အလေးချိန် ချရမယ်။
7. ဆီးချို အမျိုးအစား (၂) ရှိနေရင် Metformin (Glucophage) ဆေးပေးမယ်။
8. ခွဲစိတ်ကုသဘို့လိုရင် Ovarian drilling နည်း လုပ်ရမယ်။